အခ်စ္ေရး Archives - Amawpyay
ဘယ်တော့မှမဆုံစည်းနိုင်တော့တဲ့ တစ်ယောက်သောသူကို သတိရလာတဲ့အခါ..
ဘယ်တော့မှမဆုံစည်းနိုင်တော့တဲ့ တစ်ယောက်သောသူကို သတိရလာတဲ့အခါ.. သင့်ရဲ့ဘဝမှာ လုံးဝ မဆုံနိုင်တော့တဲ့ သူတစ်ယောက်၊ အမြဲ သတိရနေသူ တစ်ယောက် ကတော့ ရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။ အခုရှိနေ ရင်လည်း ရှိနေမှာပေါ့။ သူက ကိုယ့်အနားလုံးဝမရှိတော့တာဖြစ်စေ၊ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ မရှိတော့ တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို သတိရတဲ့ အချိန် ရှိမှာပါပဲ။ အဲ့လိုအချိန်မှာ တမ်းတစိတ်ကြောင့် ရူးရူးမိုက်မိုက် မဖြစ်သွား ပါနဲ့။ သင်ခံစား နိုင်ပါတယ်။ နာကျင်နိုင်ပါတယ်။ သတိရ နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတိရတဲ့ အချိန်တိုင်း အရင်ကထက် ပိုသက်သာစေ မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။ ၁။ ဒီလိုခံစားရတာ သင့်အမှား မဟုတ်ပါဘူး အချိန်က အရာရာကို ကုစား သွားမယ်လို့ …
မိန်းကလေးတွေက အရမ်းချစ်သွားမိရင် ကိုယ့်သွေးသားရင်းလိုပဲခံစားရတာ
မိန်းကလေးတွေက အရမ်းချစ်သွားမိရင် ကိုယ့်သွေးသားရင်းလိုပဲခံစားရတာ မိန်းကလေးတွေဟာ မွေးရာပါ မိခင်စိတ် ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။ စိတ်နှလုံးနူးညံ့တယ်၊ သနားလွယ်တယ်၊ အနစ်နာခံ တတ်တယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်မိပြီ ဆိုရင် သူမတူအောင်ကို ချစ်နိုင်ကြပါတယ် …. ။ ချစ်သူအတွက် ချစ်သူ အဖြစ်သာမက မိခင်တစ်ယောက် နီးပါးကို ဂရုစိုက် နိုင်တဲ့၊ ချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေ သူပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ချစ်သူသာ ဒီလို မိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့ရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကံအကောင်းဆုံး လူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိထား လိုက်ပါနော် ။ (1) အချိန်ပြည့်စိတ်ပူပေးတယ် မိခင်တစ်ယောက် နီးပါး …
အချိန်ကြာ လမ်းခွဲပြီးသွားမှ ပြန်လက်တွဲသွားကြတဲ့စုံတွဲတွေရဲ့ ထူးခြားချက်(၅) ချက်
အချိန်ကြာ လမ်းခွဲပြီးသွားမှ ပြန်လက်တွဲသွားကြတဲ့စုံတွဲတွေရဲ့ ထူးခြားချက်(၅) ချက် ချစ်သူချင်း အဆင်မပြေလို့ ကွဲကြ၊ ကွာကြတာဟာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လမ်းခွဲပြတ်စဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူတွေ အချိန်အတော်ကြာ အဆက်အသွယ်လည်း မလုပ်ကြဘဲ နောက်မှ ပြန်တွဲကြတဲ့အခါ နှစ်ယောက်ကြားက အချစ်ရေးမျာ ကောင်းကျိုးလေးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကတော့.. (၁) သံယောဇဉ်ပိုတိုးလာတယ် ဒါကတော့ ဒီလို ပြန်တွဲခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးကိစ္စပါပဲ။ ဝေးပြီးတဲ့နောက် တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ထားရှိတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ပိုသေချာသွားတာကြောင့် သူနဲ့လည်းအတူပြန်ရှိရော သံယောဇဉ်တွေ အရင်ကထက်ပိုတိုးလာတာပါ။ (၂) ပိုရင့်ကျက်လာကြတယ် ပြဿနာဖြစ်တိုင်း အရင်လို ဒေါနဲ့မောနဲ့ ြဖေရှင်းမယ်၊ ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ပြတ်မယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်တွေကြောင့် ဝေးသွားခဲ့ကြတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်း ပြဿနာအကြီးကြီးကြုံလာရင်တောင် …
ခ်စ္သူရည္းစားရွိသူတိုင္းဖတ္ရန္ ခုေခတ္မွာ ရည္းစားထားဖို႔က ထမင္းစား ေရေသာက္ သေလာက္ သိပ္လြယ္ကူလြန္းပါတယ္။ ေရရွည္တည္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြား ဖို႔ရယ္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက သစၥာေစာင္ ့သိတတ္ဖို ႔ရယ္ကမွ ခက္တာ။ ထစ္ခနဲရွိ ျပတ္ၿပီ ဆိုတဲ့ စကား မေျပာမိဖို႔ရယ္ စစ္မေရာက္ခင္ ျမႇားကုန္ လမ္းခြဲ မသြားဖို႔ ရယ္ကမွ ခက္တာ။ အတူခ်မွတ္ ထားတဲ့ Plan ေတြ ေမ့မသြားဖို႔ရယ္ ေပးၿပီးသား ကတိ ေဖာက္ဖ်က္ မသြားဖို႔ ရယ္ကမွ ခက္တာ။ အခု Propose လုပ္ အခုခ်က္ခ်င္း ခ်စ္သူ ရည္းစားေတြျဖစ္ တစ္ပတ္ တစ္လမၾကာဘူး ကြဲၾကတဲ့ ေခတ္မွာ ကိုယ့္အတြက္နဲ႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား မ်က္ရည္ …
လက်တွဲဖော် အချင်းချင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးနည်းများ
လက်တွဲဖော် အချင်းချင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးနည်းများ လက်တွဲဖော်အချင်းချင်းဆိုတာက အမြဲကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေကိုပဲ ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ တရားသေ သတ် မှတ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကောင်းအတူ ဆိုးအတူဆိုတဲ့အတိုင်း ပျော်စရာတွေဆိုရင် ဆတိုး ခံစား တတ်ဖို့ စိတ်မကောင်းစရာဆို တစ်ဦးဦးနဲ့ တစ်ဦး ပြန်လှန် အားပေး ဖြေသိမ့်ပြီး ဝေမျှ တတ်ရ မှာပါ။ လက်တွဲဖော် အချင်းချင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးနည်းများက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆို တာကို Marry ကနေ ပြောပြပေးချင်တယ်နော်။ အောင်မြင်ခြင်းကို ခံစားရတဲ့အချိန်တွေမှာ အောင်မြင်ခြင်း အသီးအပွင့်တွေကို ဝေမျှပါ။ အောင်မြင်မှုတွေကို အတူတကွ ချီးမြှောက်ပါ။ ခက်ခဲချိန်တွေကို အားပေးပါ။ အောင်မြင်ခြင်းကို ခံစားရတဲ့အချိန်တွေမှာ အောင်မြင်ခြင်း အသီးအပွင့်တွေကို …
မိန္းကေလးေတြရဲ႕ အထာေပးနည္း ၆ နည္း မိန္းမတို႔ ဣေျႏၵ ေရႊေပးလို႔မရ ဆိုတဲ့အတုိင္း မိန္းကေလး အမ်ားစုဟာ သူတို ႔ႏွစ္သက္တဲ့ သူကို တိုက္ရိုက္ဖြင့္ေျပာေလ့မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က အထာေပး တတ္ၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ကိုယ့္ကို ေၾကြ ေနလား ဆိုတာ သိရွိဖုိ႔ အထာေပးနည္း ၆ နည္းကို ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါ တယ္။ ၁။ အၾကည့္ ဣေျႏၵအရ ေယာက္်ားေလး တစ္ေယာက္ကို မ်က္လုံးျပဴးႀကီးနဲ႔ အၾကာႀကီး စိုက္ၾကည့္ေလ့ မရွိပါ ဘူး။ ခဏခဏ ခိုးၾကည့္တဲ့ စနစ္၊ ဖ်က္ကနဲ ခဏခဏ ၾကည့္တဲ့ စနစ္ကိုသာ က်င့္သုံး …
လိုသုံး “မိန်းမသားဆိုတာ”လိုမှအသုံးချခံရတဲ့ “လိုသုံး”တစ်ယောက်မဖြစ်အောင်အမြဲသတိရှိနေရမယ်။ လောကမှာသိပ်ရိုးအလွန်းတဲ့မိန်းမသားတွေဟာဆုံးရူံးမူတွေကြုံရတာများပါတယ်။မိန်းမသားဆိုတာလိုမှအသုံးချခံရတဲ့သူတစ်ယောက်မဖြစ်အောင်အမြဲသတိရှိနေရမယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကပညာတတ်ခြင်း,မတတ်ခြင်းရုပ်ဆိုးခြင်း,ရုပ်ချောခြင်းအရာရာကိုဦးဆောင်နိုင်ခြင်း,မဦးဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ဟာမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူး။ မိန်းမသားတစ်ယောက်ကအရည်အချင်းရှိတာနဲ့တန်ဖိုးရှိတာကတခြားဆီပါ။ကိုယ်ကတန်ဖိုးရှိအောင်မနေတတ်ရင်တန်ဖိုးမဲ့တာပါပဲ။ တခြားသူအတွတ်ကိုယ်ကလိုသုံးဘဝမဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ရမယ်။ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့မာနတွေရှိရမယ်။ခြုံလွှမ်းအပ်တဲ့အရှက်,အိနြေ္န,သိက္ခာ,နဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတွေရှိရမယ်။အရာရာကိုထိန်းသိမ်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ ဒီခေါတ်အခါမှာသိပ်အညှာလွယ်လွန်းတဲ့မိန်းမဆိုရင်လူတွေတန်ဖိုးမထားချင်ကြတာ…သိပ်ရဲတင်းသဘောကောင်းလွန်းတဲ့မိန်းမဆိုရင်လူတွေမနှစ်သက်တတ်ကြတာ…သိပ်ရိုကျိုးခယလွန်းတဲ့မိန်းမဆိုရင်လူတွေမကြိုက်တတ်ကြတာတွေပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မာနနဲ့တန်ဖိုးတွေကို ဘယ်တော့မှစွန့်လွှတ်မပြစ်ပါနဲ့.။လောကမှာသိပ်ရိုးအလွန်းတဲ့မိန်းမသားတွေကဆုံးရူံးမူတွေကြုံရတာများပါတယ်။ Credit Zawgyi လိုသုံး “မိန္းမသားဆိုတာ”လိုမွအသုံးခ်ခံရတဲ့ “လိုသုံး”တစ္ေယာက္မျဖစ္ေအာင္အၿမဲသတိရွိေနရမယ္။ ေလာကမွာသိပ္႐ိုးအလြန္းတဲ့မိန္းမသားေတြဟာဆုံး႐ူံးမူေတြႀကဳံရတာမ်ားပါတယ္။မိန္းမသားဆိုတာလိုမွအသုံးခ်ခံရတဲ့သူတစ္ေယာက္မျဖစ္ေအာင္အၿမဲသတိရွိေနရမယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ကပညာတတ္ျခင္း,မတတ္ျခင္း႐ုပ္ဆိုးျခင္း,႐ုပ္ေခ်ာျခင္းအရာရာကိုဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း,မဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ဟာမိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးမဟုတ္ဘူး။ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ကအရည္အခ်င္းရွိတာနဲ႔တန္ဖိုးရွိတာကတျခားဆီပါ။ကိုယ္ကတန္ဖိုးရွိေအာင္မေနတတ္ရင္တန္ဖိုးမဲ့တာပါပဲ။ တျခားသူအတြတ္ကိုယ္ကလိုသုံးဘဝမျဖစ္ရေအာင္ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ရမယ္။ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့မာနေတြရွိရမယ္။ၿခဳံလႊမ္းအပ္တဲ့အရွက္,အိေျႏၷ,သိကၡာ,နဲ႔ကိုယ္က်င့္တရားေတြရွိရမယ္။အရာရာကိုထိန္းသိမ္းဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္။ ဒီေခါတ္အခါမွာသိပ္အညႇာလြယ္လြန္းတဲ့မိန္းမဆိုရင္လူေတြတန္ဖိုးမထားခ်င္ၾကတာ…သိပ္ရဲတင္းသေဘာေကာင္းလြန္းတဲ့မိန္းမဆိုရင္လူေတြမႏွစ္သက္တတ္ၾကတာ…သိပ္႐ိုက်ိဳးခယလြန္းတဲ့မိန္းမဆိုရင္လူေတြမႀကိဳက္တတ္ၾကတာေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ကိုယ့္ရဲ႕မာနနဲ႔တန္ဖိုးေတြကို ဘယ္ေတာ့မွစြန္႔လႊတ္မျပစ္ပါနဲ႔.။ေလာကမွာသိပ္႐ိုးအလြန္းတဲ့မိန္းမသားေတြကဆုံး႐ူံးမူေတြႀကဳံရတာမ်ားပါတယ္။ Credit
သင့္ကို အသက္နဲ႔အမွ်ခ်စ္တဲ့ ေယာက်ာ္းဆိုတာ ဒီလိုလကၡဏာ (၅) မ်ိဳး ရွိကိုရွိပါတယ္ …
သင့္ကို အသက္နဲ႔အမွ်ခ်စ္တဲ့ ေယာက်ာ္းဆိုတာ ဒီလိုလကၡဏာ (၅) မ်ိဳး ရွိကိုရွိပါတယ္ … အခ်စ္ဆိုတာ ႏွလုံးသားခ်င္း ဆက္ႏြယ္ေနမွ ျဖစ္ ေပၚလာတဲ့အရာတစ္ခုပါ၊ အခ်စ္ကံေကာင္ းတဲ့ မိန္းကေလးေတြကေတာ့ ဒီလိုေယာက်ာ္းမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားရမွာပါေနာ္..။ သင္ေရာ ပိုင္ဆိုင္ ထားရၿပီးလား ။ ပိုင္ဆိုင္ထားရၿပီးဆို အရင္ကထက္ ပိုလိမၼာပါေတာ့ေနာ္…. (၁) သင့္ကို နားလည္မႈအျပည့္ေပးထားတယ္ ” သင့္ကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ထားတာမ်ိဳး မရွိဘဲ သင့္ကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ အၿမဲ နားလည္မႈ ေပးထားသူ တစ္ေယာက္ပါ။ မေကာင္းတာ ဆိုရင္ေတာ့ ဆိုးဆုံးမ တတ္တာက လြဲရင္ သင့္ကို အၿမဲ လြတ္လပ္စြာ …
မိခင္စိတ္ထားၿပီး အမုန္းခံခ်စ္ေနရလို႔ ပူညံံပူညံလုပ္တတ္တဲ့ ဇနီးကို တန္ဖိုးထားပါ
မိခင္စိတ္ထားၿပီး အမုန္းခံခ်စ္ေနရလို႔ ပူညံံပူညံလုပ္တတ္တဲ့ ဇနီးကို တန္ဖိုးထားပါ ပူညံံပူညံလုပ္တတ္တဲ့ ဇနီးကို တန္ဖိုးထားပါ သူတို႔က မိခင္စိတ္ထားၿပီး အမုန္းခံခ်စ္ေနရလို႔ ႏွေမ်ာ တတ္တဲ့ ဇနီးကို တန္ဖိုးထားပါ သူကသင့္ရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ေတြးၿပီး ထိန္းသိမ္း ေပးေနရလို႔ ။ ဟင္းခ်က္ညံ့တဲ့ ဇနီးကို တန္ဖိုး ထားပါ အရသာေရာ့ေပမဲ့ အျပင္စာေတြ ထက္ေတာ့ သင့္က်မ္းမာေရး စိတ္ခ်ရလို႔ ႐ုပ္မလွတဲ့ ဇနီးကို တန္ဖိုးထားပါ လမ္းေပၚက မိန္းမေတြလို မလန္းေပမဲ့ သင့္ဘဝရဲ႕ ေနဝင္ခ်ိန္ေတြ မဂြမ္းဖို႔ေတာ့ စိတ္ေအးရလို႔ တကယ္ေတာ့ မိန္းမေတြ ပူညံပူညံ လုပ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ့္လင္သားကို အေကာင္းဆုံးေတြ ပဲျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ေနရာတကာလိုက္ေျပာရင္ အခ်စ္ေတြေရာ့ မယ္ ဆိုတာ …
ချစ်ရသူချင်းစိတ်ချင်းဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်တယ် ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်ခံစားချက်တူညီတာကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစားမှုနီးစပ်တဲ့ ချစ်သူတွေဟာ ပေါင်းဖက်ရတတ်ပါတယ်။ လူဦးရေသန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ထဲကမှ အချစ်ရဆုံးသူတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူ ချစ်ရကံကြုံတာကို တမင်တကာ တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ယုံပါသလား။ လူတစ်ယောက်ကို မုန်းမေ့ဖို့လွယ်ပေမယ့် ချစ်ရတာခက်ခဲပါတယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချစ်နေတဲ့ ချစ်သူတွေဟာ တမင်တစ်ကာ တိုက်ဆိုင်မှုမျိုးနဲ့တော့ ချစ်နေကြရတာမဟုတ်ပါဘူး။ မမြင်နိုင်တဲ့စိတ်က နှောင်တွယ်မှုတွေနဲ့သာ အချစ်ပိုနေကြတာပါ။ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်တယ် ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲ? တစ်ခါတစ်လေ သင်ပြောလိုက်၊ သင် တွေးနေ၊ သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်းဟာ တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ တူညီနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ရသူ နဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်ခံစားချက်တူညီတာကို …